Tekinoroji - Shenzhen Lantaisi Technology Co, Ltd.
● Strategic Cooperation: Tine nyanzvi dzepamusoro-soro dzemarudzi akawanda dzechip design, uye vanodzoka kune software yepasi dhizaini. Isu tinoita iyo R & D yekukwirira kusangana IC, nyowani tekinoroji kunyorera uye nyowani chigadzirwa dhizaini. Isu takagadzirira kuve nehunyanzvi pamwe nevatengi vedu.
● technical Team Kugona: Tine timu yevanopfuura vanhu makumi matatu mune yehunyanzvi isina waya yekuchaja chigadzirwa R&D uye dhizaini dhizaini, isu tinovaka tekinoroji-yakanangana, timu inovavarira mhando, kushandira vadyidzani pasirese.
● Chigadzirwa Sevhisi Kugona. Basa riri nani remhando kugadzirisa mudzi wedambudziko, kushandira vatengi nekukosha kwakanyanya.
● Makomborero: Unyanzvi hwechigadzirwa dhizaini, chimiro, chimiro, maitiro ekuburitsa; Yakakwana Hardware tekinoroji, yakagadzirirwa mhinduro; Yakarongeka mhando manejimendi kugona kugona kuve chigadzirwa chigadzirwa.
2. Yepamberi Supply Chain Management
● Kubva kuR & D, dhizaini, PCBA kugadzirwa, makore ane ruzivo muindasitiri yemagetsi akawedzera manejimendi edu emhando yepamusoro yekutengesa, izvo zvinotibatsira kupa zvakaderera mutengo uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vamwe vedu uye zvinounza huwandu hunokosha kwauri.
(Musangano, R & D zvishandiso, zvigadzirwa zvekugadzira, kuchengetedza uye kutakura ...)